TvOS 3, watchOS 14.6 uye iOS 7.5 betas 14.6 yakaburitswa | Ndinobva mac
Sezvatakakurukura mukuvhurwa kwe beta vhezheni yechitatu yeMacOS Bic Sur, iyo Cupertino kambani zvakare yakaburitsa iyo t3 beta shanduro dzeTVOS 14.6, watchOS 7.5, iOS uye iPadOS 14.6. Sezvo neiyo beta vhezheni yesisitimu yedu inoshanda, hapana shanduko dzakanyanya kukosha mavari, ivo vanonyanya kutarisa kudzikama, chengetedzo uye kururamisa kwekukanganisa kweshanduro dzapamberi dzakaburitswa.
Sezvazvakaita neshanduro dzakapfuura, hapana dhata pane izvo zvinowedzerwa maererano nekugadzirisa, kugadzirisa zvipembenene, kana zvitsva zvakasiyana, asi zviri pachena kuti kugadzirisa kuri kutarisisa pakuita kuti sisitimu yekushanda ishande nemazvo uye ive yakatsiga sezvinobvira. Dzese idzi beta shanduro Ivo vatovepo kurodha pasi kuburikidza neOTA kana iwe uri mugadziri. Izvo zvinokwanisika kuti mumaawa mashoma anotevera idzi shanduro dzichave dzichiwanikwawo mune yeruzhinji betas, kune avo vese vakanyoreswa.
Rangarira kuti idzi beta shanduro dzinogona kunge dziine mabugs, dzive dzisina kugadzikana kana kutopindirana nezvimwe zvinoshandiswa zvaunoshandisa muzuva nezuva kune rako rebasa, zororo, nezvimwe, saka zviri nani kuramba uchibva munzira uye wakanyanya kumirira shanduro dzinofanira kuburitswa. yeruzhinji beta, kunyanya nekuda kwematambudziko anogona kuitika neApple Watch. Zvichatibata nyatso tevera shanduko yeiyi mitsva beta beta.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » iOS » Betas 3 ye tvOS 14.6, watchOS 7.5 uye iOS 14.6 yakaburitswa
MacOS Big Sur 3 beta 11.4 yakaburitswa kune vanogadzira